रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका रानुदेवीको निधन - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
काठमाडौं । रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका रानुदेवीको निधन भएको छ । प्रजातन्त्र सेनानीसमेत रहेकी उनको विहीबार राती निधन भएको परिवारस्रोतले जनाएको छ । उनको ८५ वर्षको उमेरमा आज राति काठमाडौं मेडिकल कलेजमा निधन भएको हो । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा होमिएर क्रान्तिकारी गीत गाउँदै हिंडेकी गायिका रानुदेवीले प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि गीतमार्फत क्रान्ति गरेको बताइन्छ । उनले आज देशको क्रान्ति युद्धमा, नेपाली नेपाली, जुनेली रात हजुर, जागे नेपाली उठे नेपाली, नोना आमा तिमी गयौ जस्ता गीतहरु गाएकी छन् । २०६३ सालमा उनले गायक सुमित खड्कासँग सहकार्य गर्दै ‘२००७ साल अघि र पछि’ नामक एल्बम प्रकाशन गरेकी थिइन् ।
रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका रानुदेवीको जन्म सन् १९३६ नोभेम्बर २७ का दिन वीरगञ्जमा भएको हो । उनका पिता ईश्वरीप्रसाद उपाध्याय र माता इन्दिरा उपाध्याय (पौडेल) हुन् । उहाँको बाल्यकाल बनारसमा बित्यो । उनको विवाह २००६ सालमा बिराटनगरका तीर्थप्रसाद अधिकारीसँग भएको हो । इतिहास विषयमा एम.ए. सम्मको अध्ययन गरेकी रानुदेवी हाल पुरानो बानेश्वरमा कान्छि छोरीसँग बस्दै आएकी थिइन् ।
नेपाली राजनीतिक क्षेत्रसँग जोडेर धेरैले नोना कोईरालालाई चिने तर उनकै बहिनी रानुदेवी अधिकारी जसले प्रजातन्त्र स्थापनाका बखतदेखि नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा पु¥याएको उल्लेख्य योगदानको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन् । बनारसमा आफ्नो बाल्यकाल बिताएकी उनले तीर्थप्रसाद अधिकारीसँग विवाह भएपश्चात विराटनगरलाई कर्मथलो बनाईन् । विशेषगरी तारिणी प्रसाद कोईरालाको प्रेरणाबाट सांगितिक क्षेत्रमा अघि बढेकी उनले आफ्नो सांगीतिक जीवनमा पनि कोईरालाले लेखेकै गीत मात्र गाईन् । वि.सं २००६ साल होस् वा ०७ सालको आन्दोलनमा उनले ‘नेपाली आघि बढ हातमा क्रान्ति झन्डा लिई’, ‘आज देशको क्रान्ति युद्धमा हाम्रो एक पुकारा होस’ लगायतका गीत गाएर जनताहरुलाई मोर्चामा होम्नका लागि अनुरोध गरिन् ।
पहिलोपटक गीत गाउँदा निकै रमाइलो लागेको कुरा उनीसँग म्यूजिक खबरले गरेको कुराकानीमा बताएकी थिइन्् । केटाकेटी पनि थिएँ, चाहना पनि त्यही थियो । त्यसले गर्दा मलाई रमाइलो लाग्यो, कुराकानीमा उनले भनिन् – “रेडियो नेपाल स्थापना हुनु अघिको त्यो रेडियोको स्वरुप, एउटा सानो कोठा थियो । उपकरणहरु खास केही थिएनन् । जो गाउनु पर्ने हो वा समाचार सुनाउनु पर्ने हो उ एक्लै भित्र गएर आफ्नो काम गथ्र्यो ।”
“गीतका शब्द र संगीत पनि तारिणीप्रसाद कोइरालाका थिए,“ उनले हामीसँगको कुराकानीमा भनेकी थिइन््– उहाँले मलाई यसरी प्रोत्साहन दिनुभयो कि मैले मजाले गाएँ ।” त्यतिबेला त मलाई त्यस्तो केही लागेन, केटाकेटी नै थिएँ । दिनरात ती गीतहरु गाउँथें रेडियोमा । गाउञ्जेल केही घटना भएन, त्यसपछि त प्रजातन्त्र आइहाल्यो नि !”
रानुदेवी अधिकारी जीवनको उत्तराद्र्धमा उनी संगीतमै आनन्द लिइरहेकी थिइन् । “बुढेसकालमा खासै केही काम पनि छैन । मेरो सहारा भनेको नै संगीत हो । एउटा भजन भए पनि गाउँछु । म बसेर गुनगुनाइरहन्छु एक्लै आनन्दले !” जे छ संगीतमै छ, भेटमा उनी भन्ने गर्थिन् ।
म्यूजिक खबर परिवार क्रान्तिकारी गायिका रानुदेवी अधिकारीप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछ ।